Homeसमाचारअ’चानक के भयो कल्पना दाहाललाई ? डाक्टरले दिए यस्तो सुझाव
April 5, 2021 admin समाचार 6682
नेपाली लोक गायनकी पछिल्लो समयकी च’र्चित गायिका कल्पना दाहालको स्वा’स्थ्यमा समस्या देखिएको छ । कमजोरीका कारण उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको हो । चिकित्सकको स’ल्लाह अनुसार उनी अहिले घरमै आराम गरिरहेकी छिन् । उनलाई इन्द्रेणीकि लोक गायिका भनेर पनि धेरैले चिन्ने ग’रेका छन् । पछिल्लो समय कल्पनाकी आमाको समेत स्वा’स्थ्य ठीक छैन ।
आमा बिरामी भएको भन्दै चि’न्ता व्यक्त गरेकी कल्पना आफु पनि बिरामी परेकी हुन् । अहिले उनी डेरामै आराम गरिरहेकी छिन् । उनी यसपटक दोहोरी च्याम्पि’यनमा भाग लिएकी छिन् । उनको जोडीमा प्रदिप रोक्का छन् । उनीहरुको जोडीको लिएर चौत’र्फी चर्चा छ । उनलाई ज्वरो संगै स्वास्थ्यमा अन्य केहि सम’स्या देखिएको बताइएकोछ ।
संखुवासभा दुर्घट`नाका घाइते भन्छन्: “ड्राइभरले फाल हान भन्दै कराए तर….
March 11, 2022 admin समाचार 3645
संखुवा`सभाको मादी नगरपालिका–६ सात|घुम्ती स्थित सडकमा बिही`बार विहान भएको बस दुर्घ’टनामा परी नि’धन हुनेको संख्या १५ पुगेको छ । दुर्घ’टनामा चालक सहित १५ जनाको मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। मादीबाट झापातर्फ जाँदै गरेको बा.४
June 4, 2021 admin समाचार 5292
August 18, 2021 admin समाचार 5424
नेपालीहरुको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्र सिड्नी’काे अर्वनमा सोम`बार साँझ एक नेपाली युवतीले पसल लुट्न आएको लुटे’रालाई लखेटेको समा`चारले यतिखेर सिड्नीभर चर्चा पाएको छ। रौटहट चन्द्रनिगा’हपुरकी स्थायी वासिन्दा पवित्रा का’र्की साँझ सात बजेतिर पसलमा बसि`रहँदा एक्कासी